Rano sy fitarihan-drano - PADAP
Manome antoka ny famokarana vary sy ireo vokatra fototra hafa ny fisiana fitaovana fitarihan-drano. Noho ny tsy fahampian’ny ho enti-manan’ireo tantsaha dia nihena ny fidiram-bolan’izy ireo tao anatin’izay taona maro izay. Noho izany, ny tetikasa PADAP dia miditra an-tsehatra amin’ny famerenana amin’ny laoniny sy fikarakarana hatrany ny loharanon-drano sy ny rano izay azo ampiasaina amin’ireo faritra voakasik’izany.
Fametrahana fanamby amin’ny famerenana amin’ny laoniny sy fikarakarana ny loharanon-drano sy ny fitarihana rano
Tsy mikendry ny famahana ireo olana mifandraika amin’ny fihenan’ny fahafahana mitarika rano fotsiny ny ezaka natao tao anatin’ny tetikasan’ny tetikasa PADAP fa amin’ny fitehirizana ny fahafahana mamokatra eto amin’ny firenena ihany koa. Ny fotodrafitr’asa rehetra dia harenina amin’ny fomba tsaratsara kokoa, ary hanaraka ny fenitra amin’ny ady amin’ny fiovaovan’ny toetrandro izany. Ny fenitra ampiasaina dia ireo izay voasoratra na ireo izay eo an-dàlam-pandrosoana ataon’ny « Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences » (CPGU) na ny sampana fisorohana vonjy maika sy ny fitantanana vonjy maika izany.
Ny tetikasa PADAP dia mifantoka indrindra amin’ny famerenana amin’ny laoniny, ny fanavaozana ary ny fikajiana ny lakandrano, ary ihany koa ny fisintomana rano amin’ireo faritra misy izany. Izy io koa dia mikendry ny hamerenana amin’ny laoniny ireo fitoeran-drano kely, ny lakandrano fanodinana ary hanatsara ny haavon’ny tany sy ny fitantanana ny fitaovana fitarihana rano.
Ankoatra izay, hampiharina ihany koa ireo hetsika hafa toy ny fametrahana na ny fanarenana ireo fitaovana fanaraha-maso hidrolojika sy ireo tobin-tsolika mampiasa ny haitao masoandro.
Ny fiaraha-miasa amin’ny ANDEA sy AUE
Miteraka voka-tsoa ho an’ny « Autorité Nationale de l’Eau et de l’Assainissement » (ANDEA) sy ireo fikambananan’ireo mpampiasa rano (AUE) isan-tsokajiny ny tetikasa PADAP. Ity farany dia handray soa manokana amin’ny fanampiana ara-teknika sy ny fanamafisana ny fahaiza-manao.
Amin’ny antsipiriany, ireo mpisehatra amin’ny tetikasa PADAP dia hiara-hiasa amin’ny ANDEA amin’ny fanisana ny loharanon-drano. Ny birao misahana ny renirano, eo ambany fanaraha-mason’ny minisiteran’ny rano, ny fidiovana ary ny fahadiovana (MEAH), dia hatsangana ho masoivoho mitarika ao amin’ny faritra SAVA. Raha mbola azo atao, ny Birao izay iraka lehibe hitantanana ny loharanon-drano dia hanampy mpiasa voatendry avy ao amin’ny ministera mpanampy sy ireo mpanampy ara-teknika izay horaisina araka izay ilaina. Hamboarina koa ireo maodely hydrolojika hahafahan’ny birao misahana ny renirano manomana ny fampiasana tany sy rano mifangaro.
Ny tetikasa PADAP dia hiantoka ny fiasan’ny AUE sy ny fikarakarana ireo fitaovana fitarihan-drano amin’ny fomba mahomby, ary hoantoka ny faharetan’ny asa. Mba hanatanterahana izany dia homena fitaovana sy masinina fambolena ireo fikambanana. Ny tetikasa PADAP dia mikasa ihany koa hamatsy vola ny fandalinana teknika famolavolana, ny asa injeniera sivily, ny fanaraha-maso ny asa fanamboarana ary koa ny famatsiana sy fametrahana fitaovana.
Ny amin’ny resaka famerenana amin’ny laoniny ny vidin’ny asa sy fikojakojana, dia handray soa amin’ny famatsiam-bola aloha ireo AUE mahomby indrindra.